रुकुम- जाजरकोट घटना: सुष्मा मल्लको छिमेकिले लखेट्दै भेरी लगेकाहरूले यसो भन्छन! (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > रुकुम- जाजरकोट घटना: सुष्मा मल्लको छिमेकिले लखेट्दै भेरी लगेकाहरूले यसो भन्छन! (हेर्नुस् भिडियो)
admin May 27, 2020 May 27, 2020 भिडियो, समाचार, समाज 0
पश्चिमरुकुम घटनाका पीडित परिवारले कारबाहीको माग राख्दै वडाध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा भएको घटना पीडित परिवारले शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरीसमेत दिएका छन् ।
नवराज विकको प्रेमिका को घर मै पुगेर स्थानीयसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस, मिडियामा आएको भन्दा फरक कथा सुनाए स्थानीयले (घटनास्थलको दृश्यसहितको भिडियो)जाजरकोट, १४ जेठ । शनिबार पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा भएको घटनामा पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा २० जनावि रुद्ध कि टानी जा हेरीसमेत दिएका छन् ।
वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, सन्तोष मल्ल,रमेश मल्ल, मोहन पुनमगरलगायत २० जनावि रुद्ध कर् तव्य ज्यानसम्बन्धी कि टानी जाहेरी दिइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षककिशोरकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।दलित अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले घ टनाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति
दिनुपर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बे पत्ताको तत्काल खोजी गर्नुपर्नेलगायत माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले पीडितका माग सम्बोधन गर्ने र माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएपछि पीडित परिवार शव बुझ्न सहमत भएका हुन् ।
चौरजहारी नगरपालिका–८ का टीकाराम सुनारको शव परीक्षण गरिएको छ भने अन्य दुई जनाको आज परीक्षण गरिने प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो । हराएका तीन जनाको खोजी भइरहेको जनाइएको छ । खोजीमा स्थानीयवासी, नेपाली सेना, स शस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवान संलग्न छन् । गोताखोरलगायत प्राविधिक स्रोत साधन नहुँदा बेपत्ताको खोजीमा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रनाउ श्रेष्ठले बताउनु भएकाे छ ।
हराएका तीन जनाको खोजीकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । खोजीकार्यमा स्थानीयवासी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरु संलग्न छन् । गोताखोरलगायत प्राविधिक स्रोत साधन नहुँदा बे’पत्ताको खोजीमा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रनाउ श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्मकै खुशीकाे खबरः नेपालमा १५५ जनाले जिते कोरोना संक्रमण!